Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A May 2011 (5)
Q and A May 2011 (5)
1. Ultrasound ရိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ သိနိုင်ပါသလား
2. မျက်နှာမှာ အမည်းစက်တွေရှိလို့ စိတ်ညစ်နေပါတယ်
3. အဲဒါ နောက်ထပ် ဆက်သောက်ရမလား
4. အမွှေးကျွတ်တဲ့ လိမ်းဆေး ရှိရင်
5. နောက်ထပ် ဆက်သောက်ရမလား
Q 1: Ultrasound ရိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ သိနိုင်ပါသလား။ ဥပမာ ဆက်ဆံပြီး တစ်လအတွင်း Urine test မသုံးဘဲနဲ့ Ultrasound ရိုက်ရင် ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ သိနိုင်ပါသလား။
• သိနိုင်ပါတယ်။ Pregnancy and Ultrasound ကိုယ်ဝန်ဆောင် နှင့် (အာလ်ထွာ-ဆောင်း) ကို ဖတ်ပါ။
Q 2: ကျွန်တော့် ကောင်မလေးက မျက်နှာမှာ အမည်းစက်တွေရှိလို့ စိတ်ညစ်နေပါတယ်။ သူ့အသက်က ၂၂ နှစ်ပါ။ အမည်းစက်က မျက်လုံးရဲ့ အောက်ဒေါင့်ဖက်တွေမှာပါ၊ ရန်ကုန်မှာ NoMarks တို့ The face shop က facial foam တို့ ဝယ်လိမ်းတာလဲ ဘာမှ မထူးလို့ပါ။
• Melasma တင်းတိပ် ကိုဖတ်ပါ။
Q 3: ဆရာရေးထားတဲ့ စာတွေထဲက ရှာဖတ်တာ ဝက်ခြံပျောက်အောင် ဆရာပြောတဲ့ အတိုင်း Doxycycline 100 mg ဝယ်သောက်တာ တော်တော်လေး သက်သာလာပြီ။ ဒါပေမယ့် သောက်တာကို ရပ်လိုက်ရင် နည်းနည်း ပြန်ထွက်လာတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဆရာ ပြောထားတာ - ၁၂ နာရီခြား တစ်ခါ ၄-၅ ရက်သောက်ပါလို့ဆရာပြောထားတာ။ အဲဒါ နောက်ထပ် ဆက်သောက်ရမလား။ ဆေးသောက်ရင်တော့ မျက်နှာနဲ့ ကျောပြင်က ဝက်ခြံတွေ တော်တော်ကြီးကို သက်သာပြီး ပါးလာတယ်။ ဆေးမသောက်ရင် ပြန်ထွက်လာတယ်။ အဲဒါ သမီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
• ဝက်ခြံကို ပိုးဝင်တာသက်သာအောင် ပြောတဲ့ဆေးက လုပ်ပေးတယ်။
• ဝက်ခြံထွက်စေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကိုတော့ မတတ်နိုင်ပါ။ ဥပမာ အရွယ်၊ ဟော်မုန်း။
• ရေးထားထဲက လိုတာတွေကို ဆင်ခြင်လိုက်နာရင် သက်သာပါမယ်။
Q 4: ကျွန်တော် အခု နိုင်ငံခြားမှာ နေပါတယ်။ အသက် ၂၄ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြား မပျက်စီးပဲနဲ့ အမွှေးကျွတ်တဲ့ လိမ်းဆေး ရှိရင် (သို့) သောက်ဆေးရှိရင် ညွှန်ပြပေးပါ။ နုတ်ခမ်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေး ရိတ်ရတာ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်လို့ပါ။ ဘယ်လို အသုံးပြုပုံလေးပါ ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
• Waxing ဖယောင်းသုံးပြီး အမွှေးတုံးစေမယ် ကို ဖတ်ပါ။
Q 5: သမီး ဆရာရေးထားတဲ့ စာတွေထဲက ရှာဖတ်တာ ဝက်ခြံပျောက်အောင် Doxycycline 100 mg ဝယ်သောက်တာ တော်တော်လေး သက်သာလာပြီ။ ဒါပေမယ့် သောက်တာကို ရပ်လိုက်ရင် နည်းနည်း ပြန်ထွက်လာတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဆရာပြောထားတာ ၁၂ နာရီခြား တစ်ခါ၊ ၄-၅ ရက်သောက်ပါလို့ ပြောထားတာ။ အဲဒါ နောက်ထပ် ဆက်သောက်ရမလား။ ဆေးသောက်ရင်တော့ မျက်နှာနဲ့ ကျောပြင်က ဝက်ခြံတွေ တော်တော်ကြီးကို သက်သာပြီး ပါးလာတယ်။ ဆေးမသောက်ရင် ပြန်ထွက်လာတယ်။ အဲဒါ သမီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ-